PressReader - Ilanga: 2018-11-22 - Sengihlushwa nangamadlozi afuna izigidi engizitholile
Sengihlushwa nangamadlozi afuna izigidi engizitholile
Ilanga - 2018-11-22 - Izindaba -
NGIVUKE ngoMsombuluko sengiyimpunyela edla izambane likapondo ongasukumi phansi. Ngize ngashisa nempepho ngibonga amadlozi ngala makhulukhulu ezigidi zamarandi avele azithela emxhakeni ngingazelele.
Phela inhlanhla enje ayejwayelekile. Ngiwabize wonke amadlozi akwaMilazi nawakwaDlamini, lapho kuzalwa khona isalukazi esingizalayo, ngabonga nginconcoza.
Sengishayele ucingo ngisho labalimi abathengisa imfuyo ukuze ngithenge inkuzi enonile, kosiwe iqatha ngosawoti, kanti nomphathi webhodlelasitolo sengimtshelile ukuthi cha ngizothenga bonke utshwala anabo.
Abafowethu ngibatshelile ukuthi bangalinge bangibangele isicefe ngemali yami, belokhu beboleka, kodwa bengayibuyisi. Phela umndeni uhlupha lapho, uma uke wezwa nje ukuthi kukhona imali onayo.
Uzwa sekukhalwa ngemali yesikole, izikweletu nalokhu nalokhuya.
Uma unomfowenu ongakaganwa, ubona usucelwa nemali yelobolo sengathi lo mfazi othathwayo ngowenu nobabili. Kangisakhulumi-ke ngabangani, nabo uthola nabakade bagcina ukuvakasha sebetheleka bezobika ezabo izinkinga sengathi uwuhulumeni wabangani, sekumele wenze lokhu abathi phecelezi yi- service delivery.
Ungathola sekunequlu labangani betoyiza ngaphandle esangweni, bebhikishela imali yamanabukeni ezingane zabo neyotshwala, bethi sebekhathele wukuphuza imbamba wena ube ugodle izizumbulu zamarandi.
Ucingo lwami selukhala lukhalile okwesinyefu esibabelwa wutwayi. Sengize ngalucima, selukhala esigxotsheni.
Nakhona kwi- social media sengizonqaba ngoba phela usuzothola sekungena izicelo zobungani, zisuka kubantu ongabazi nokubazi. Nomama bezingane esezikhulile, ezingamadoda, nabo ubathola sebefona besho ukuthi zidinga lokhu nalokhuya.
Wake wayibonaphi wena indoda endala eneminyaka engamashumi amathathu, enomfazi nezingane, isadinga imali yesondlo? Umagcino wami okunguyena engisamondla, uthe kumele ngithenge indiza enophephela emhlane njengalaba bantu baleli bhange eliwile, okuthiwa yi-VBS, ukuze ngimyise ngayo esikoleni, akhiphe unyawo.
Uthe nale ndlu esihlala kuyona isincane, ngakho kumele siyothenga isithabathaba lapho kuhlala khona abantu abanemali engasukumi phansi.
Uthe neFerrari ethi yena, iyadingeka ukuba ipake nje egalaji futhi uzofunda ngayo ukushayela.
Uthi njengoba engakafiki kule minyaka lapho evunyelwe khona ukushayela, uzohlala ephethe isaka lemali, egwazela amaphoyisa njalo nje uma emmisa.
Inkosikazi yona seyenze amalungiselo okuyothenga izimpahla eParis, eMilan naseNew York, kanti ngapha ithi izofaka isicelo sokwahlukanisa enkantolo ibisithola uhhafu wale mali yami.
Nesalukazi esingizalayo sithumele umlayezo ngamadlozi, sithi naso sifuna itshe lethuna elingcono kunaleli esasifakela lona. Sithi sifuna itshe elinedamu lokubhukuda, futhi libe nobhazabhaza kamabonakude esizowubuka ukuze sona nabangani baso, bangaphathwa yisizungu.
Sithi lo muntu obhekene nezemali ezulwini unokungayikhokheli iDSTV, bese bengakwazi ukubukela Isibaya, okuwuhlelo abaluthanda kabi.
Singitshele futhi ukuthi iqembu lebhola lesizwe, iBafana Bafana, selehlule nomthandazo, njengoba kade belithandazela ukuba linqobe, kodwa kuyala.
Sebeze bamema nezingelosi ukuba zithandaze kanye nabo, kodwa hhayi kunhlanga zimuka namaphepha. Bese ngicabanga ukuduka nezwe, ngiyozihlalela eDubai ukuze ngizidlele imali yami ngokuthula, kodwa ngabuye ngakhumbula ukuthi konje kunamaGupta.
Mhlawumbe kumele ngiziyele eSeychelles, lapho ngizofike khona ngixhase iqembu lebhola lesizwe, ngibe sengiyabatshela futhi ukuthi ngifuna ukudlala, uma kungenjalo ngiyaluhoxisa uxhaso lwami.
Ngithe ngiyalulandela lolu daba lwale mali engiyitholile, ngatshelwa ukuthi kumele ngikhiphe u-R50 million ukuze ikhululwe lapho ihleli khona eSwitzerland.
Ngimane ngabona ngingesona isiwula ukuthi phela ngiyaqolwa lapha. Ngase ngibatshela laba bantu abathi banginika lezi zigidi ukuthi bangamane bayigcine leyo mali, noma bayinike omunye umuntu.
Njengoba sekusondele uKhisimusi nje, lobu buqola bande kakhulu, lapho uthola imilayezo yokuthi kukhona umuntu onesibongo esifana nesakho okushiyele izizumbulu zemali, noma bathi uphumelele emncintiswaneni ongazange wawungenela.
Qaphelani-ke bantu bakithi, kayikho imali eke yazifikela nje ungenzanga lutho. NeLotto imbala kumele uyidlale ukuze uwine.